ယူရို ၂၀၂၀ အတွက် နောက်ဆုံးလက်မှတ် ၄ စောင် . . . . . ဘယ်သူတွေ ရသွားမလဲ ? - SPORTS MYANMAR
ယူရို ၂၀၂၀ အတွက် နောက်ဆုံးလက်မှတ် ၄ စောင် . . . . . ဘယ်သူတွေ ရသွားမလဲ ?
ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲ အတွက် ခြေစစ်ပွဲ ပထမ ပိုင်း ပြီးဆုံး သွားခဲ့ ပါပြီ ။ တနင်္လာနေ့ ညက ကစား ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တွေ အပြီး မှာတော့ လာမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မှာ ကျင်းပမယ့် ဥရောပ ချန်ပီယံ ရှစ် ပြိုင်ပွဲ ကြီး အတွက် ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင် တဲ့ အသင်း ၂၀ ပေါ်ထွက် လာခဲ့ ပြီပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ လက်ကျန် ၄ နေရာ အတွက် ကတော့ ၂၀၂၀ နွေရာသီ မှာ ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင် ကြရမှာ ပါ ။
ဒီ ၄ နေရာ အတွက် မဲခွဲ မှု ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေး နေ့က ပြုလုပ် ကျင်းပ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီ မဲခွဲမှု အပြီး မှာတော့ ယူရို ၂၀၂၀ လက်မှတ် ၄ စောင် အတွက် စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ရာ အတွဲ အဖက်တွေ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပြီး ၂၀၂၀ မတ်လ ကနေစပြီး ယှဉ်ပြိုင် ကစား ကြတော့ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
ခြေစစ်ပွဲ ပထမ အဆင့် မှာ မအောင်မြင်ဘဲ ကျန်ရစ် ခဲ့တဲ့ အသင်းတွေ အနက် က ၁၆ သင်း ဟာ လမ်းကြောင်း ၄ ခု စီ နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစား ရမှာ ဖြစ်ပြီး လမ်းကြောင်း တစ်ခု စီ မှာ အနိုင် ရရှိတဲ့ အသင်းတွေ ဟာ ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲ ကို အောင်မြင် လာကြ မှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ခြေစစ်ပွဲ လမ်းကြောင်း ၁ မှာ တော့ အိုက်စလန် ၊ ရိုမေးနီးယား ၊ ဘူဂေးရီးယား နဲ့ ဟန်ဂေရီ တို့ပါ၀င် နေကြ ပါတယ် ။ ဆီမီး ဖိုင်နယ် မှာတော့ အိုက်စလန် – ရိုမေးနီးယား ၊ ဘူဂေးရီးယား – ဟန်ဂေရီ တို့ တွေ့ဆုံ ခဲ့ကြ ပြီး အိုက်စလန် နဲ့ ဘူဂေးရီးယား အိမ်ကွင်းတွေ မှာ တစ်ကျော့တည်း ယှဉ်ပြိုင် ကစား ကြမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ လမ်းကြောင်း ၁ ရဲ့ ဗိုလ်လုပွဲ ကတော့ ဆီမီး ဖိုင်နယ် ၂ ခု က နေ အနိုင် ရလာတဲ့ အသင်း ၂ သင်း ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် ကစား ရမှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဗိုလ်လုပွဲ ကလည်း တစ်ကျော့တည်း ပဲ ဖြစ်ကာ ဘူဂေးရီးယား – ဟန်ဂေရီ ပွဲက အနိုင် ရလာသူ ရဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစား မှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ခြေစစ်ပွဲ လမ်းကြောင်း ၂ မှာတော့ ဘော့စနီးယား နဲ့ မြောက် အိုင်ယာလန် ၊ စလိုဗက်ကိးယား နဲ့ အိုင်ယာလန် တို့ ဟာ ဆီမီး ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်တွေ အဖြစ် ယှဉ်ပြိုင် ကစား သွားကြမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဗိုလ်လုပွဲ ကိုတော့ စလိုဗက် – အိုင်ယာလန် အတွဲ ကနေ အနိုင် ရလာသူ ရဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင် ရမှာ ဖြစ်ပြီး လမ်းကြောင်း ၄ ခု အနက် ခြေစွမ်းညီတဲ့ အသင်းတွေ တွေ့ဆုံတဲ့ လမ်းကြောင်း အဖြစ် သတ်မှတ် ထားကြပါတယ် ။
ခြေစစ်ပွဲ လမ်းကြောင်း ၃ မှာတော့ စကော့တလန် – အစ္စရေး ၊ နော်ဝေ – ဆားဘီးယား တို့ ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံ နေကြပြီး ဗိုလ်လုပွဲ ကိုတော့ နော်ဝေ – ဆားဘီးယား ဆီမီး ဖိုင်နယ် မှာ အနိုင် ရလာမယ့် အသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်း မှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစား သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ခြေစစ်ပွဲ လမ်းကြောင်း ၄ မှာတော့ ဂျော်ဂျီယာ နဲ့ ဘီလာရု ၊ မြောက် မက်ဆီဒိုးနီးယား နဲ့ ကိုဆိုဗို တို့ ယှဉ်ပြိုင် ကစား ကြမှာ ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်လုပွဲ ကတော့ ဆီမီး ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ် ၁ က အနိုင်ရသူ ရဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင် ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ လမ်းကြောင်း ၄ ခု ထဲ မှာ အင်အား အနည်းဆုံး အသင်းတွေ ပါ၀င်တဲ့ လမ်းကြောင်း အဖြစ် သတ်မှတ် ထားကြပါတယ် ။
ဆီမီး ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ် ၁ နဲ့ ၂ တွေ ကို တော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ မှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစား သွားကြ မှာ ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်လုပွဲ ကိုတော့ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ မှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစား ကြမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဗိုလ်လုပွဲ ၄ ခု ကနေ အနိုင် ရလာမယ့် အသင်း ၄ သင်းကတော့ ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲ အတွက် ကျန်ရှိနေတဲ့ နေရာ ၄ ခု ကို ရယူ သွားကြ မှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
နိုင်ငံပေါင်း ၁၂ နိုင်ငံ မှာ လှည့်လည် ကျင်းပမယ့် ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲကြီး ကို ဘယ်အသင်းတွေ တက်လှမ်း လာနိုင် မလဲဗျာ . . . .
ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲ အတွက် ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်ပြီး အသင်းများ နှင့် မဲအိုး နံပါတ်များ –
ဘယ်ဂျီယံ ၊ အီတလီ ၊ အင်္ဂလန် ၊ ဂျာမဏီ ၊ စပိန် ၊ ယူကရိန်း
ပြင်သစ် ၊ ပိုလန် ၊ ဆွစ်ဇာလန် ၊ ခရိုအေးရှား ၊ နယ်သာလန် ၊ ရုရှ
ပေါ်တူဂီ ၊ တူရကီ ၊ ဒိန်းမတ် ၊ သြစတြီးယား ၊ ဆွီဒင် ၊ ချက်
ဝေးလ် ၊ ဖင်လန် ၊ Play-off Path A ၊ Play-off Path B ၊ Play-off Path C ၊ Play-off Path D